Lokuphila kwabaningi kuphambili ezinhlelweni zikaHulumeni. Famous ski resort, Rafting, Kuzonyuka eside - konke lokhu kwenza kube nokwenzeka ukuba ningabi nje kuphela ukugcina wena isesimeni esihle ngokomzimba, kodwa futhi bajabulele ubuhle nokusondelana nemvelo. Nokho, lapho konke lokhu kuhlangene induduzo egumbini, kuyasiza uphumule ngemva eside futhi umatasa usuku okuvelayo, kanye ukutholakala izikhumbuzo zamasiko nezomlando ukwenza iholide nakakhulu ezithakazelisayo futhi zihlukahlukene. Omunye indawo enjalo - it is a ipaki-hotel "Relight" (esifundeni eMoscow).
eziyinkimbinkimbi Modern futhi entsha itholakala endaweni Isizalo ehlanzekile esifundeni laseMoscow, 70 nje km kusukela enhlokodolobha uqobo kanye km 15 kusukela maphakathi Russian-Orthodox - emzini Sergiev Posad. Ihhotela is a multi-futhi silungele ukunikeza amasevisi inhlangano izinkambo zomlando namasiko, enkundleni yezemidlalo, kanye ukubamba nanoma celebration efana lomshado. Omunye izinzuzo main of indawo yayo - izinkuni azungeze, umoya ohlanzekile, futhi ibanga kusuka umsindo edolobheni befuna. Uma zikhethwa njengoba indawo yokuphumula "Relight" (hotel), ikheli kulula ukukhumbula: nesifunda eMoscow, Relight, Pioneer Street, 9.
Ihhotela is banzi ukwakhiwa omusha, ngakho abahambi babe ukunambitha nempahla yalo yesimanje sleek isitayela zakudala kanye angadle ngabuhle obutheni. Amakamelo kahle sihlomile, babe yokugezela abo nge zokugeza khulula, a flat-screen satellite TV, air conditioning, umshini wokomisa izinwele. Intengo kuhlanganisa ibhulakufesi. It unikeza yokuhlala e kwelinye lamakamelo nanye abasemazingeni ahlukahlukene wenduduzo:
Inombolo "blocky" - imele umnotho ezimbili isikhala, futhi zixhunywe ezivamile ephasishi okugeza, ngasinye endaweni ka-15 m 2 has imibhede olulodwa ezimbili. Eshibhe yokuhlala inketho: izindleko eyodwa ubusuku kusuka 2300 kuya ruble 2600. Ifanele imindeni kanye nezinkampani ezinkulu.
Igumbi "Umnotho" - kwi okulingana ezingeni kulowo eyedlule, kodwa ehlukile yokugezela yangasese ikamelo indawo 18 m 2. Lolu khetho yokuhlala "Relight" (hotel) incoma ukuthi labo abathunywe enhlokodolobha izinsuku ezimbalwa.
Igumbi "Standard" - eyikamelo elilodwa yavula ikamelo layo elikhulu (18 m 2), ngaphezu enanini layo ibhulakufesi kuhlanganisa ukufinyelela zokushushuluza eqhweni, swimming pool kanye ejimini. Kulesi isigaba Inekamela okulala "Standard" (40 m 2).
Igumbi "Induduzo" - lihlukile endaweni odlule - 25 m2.
elula Junior (22 m2) futhi i-superior (35 m2) nge minibar, ephephile ngabanye.
Igumbi lomndeni (56 m 2) - amakamelo amabili okulala, indlu yangasese, ikhishi elincane konke okudingayo ukuze bapheke sauna yangasese. kuzo Maximum - 4 abantu, futhi izindleko ngekamelo ubusuku ngabunye - ruble ayizigidi 10.
Okunethezeka elula (40-42 m2) kanye sauna (45 m 2) - lokhu iyona engcono kunazo ukuthi angaletha izivakashi zayo "Relight" (hotel). Amakamelo zikanokusho ahlotshiswe materials abachwepheshile, has zonke zokugeza kudingekile, itiye, ibha mini.
Ngemuva kokuvakashela kanye, ngokuvumelana abanikazi ehhotela, zonke izihambeli ngokuqinisekile ayobuyela. A cafe ethokomele, njengoba kulula ukuqagela, ahlotshiswe sports-isitayela, evulekile kusuka ayisishiyagalolunye ekuseni kuze nanye. Izivakashi amahhala ukujabulela ngesivinini ukufinyelela wireless inthanethi, kanye uhlelo nezimo izaphulelo.
Imenyu Main ayivumelekile ngesikhathi sekhefu ngezimpelasonto kanye Christmas amaholide. Kulezi amahora uzonikezwa imenyu isethi okulungiselelwe labapheki ezihamba phambili kusukela imikhiqizo yokudla emisha. Imenyu kuhlanganisa izitsha bendabuko cuisine Russian nabaseYurophu.
Esikhathini cafe "Puck" ( "Relight" Ihhotela) uhlela amadili, avame akhethe le ndawo imishado. A ivulekile eliqatjhiweko ekwazi ukuhlalisa abantu abangu abantu abayikhulu, yona ifakwe isigaba, ukukhanyisa professional nemishini ye-sound futhi karaoke. A ibhonasi nice kimi nesipho esivela ekuphathweni kulokhu kuyoba suite laba abashadayo, pool khulula spa amaphilisi (kabili ukuvakashelwa imizuzu engafika ku 30). Zonke ezinye izindaba zika womcimbi, izivakashi kungabhekwana ku eziyinkimbinkimbi, usebenzisa 20% isaphulelo.
Ihhotela has a unqambothi ejimini endaweni 1000 m 2. It yenzelwe inhlangano nokuziphatha ezemidlalo mass izenzakalo, ukuqeqeshwa, umncintiswano. It enikeziwe iforamu kubalandeli kanye izibukeli, inqobo yonke imishini ezidingekayo.
Ngo "Relight" Izihambeli zingase ukusizakala omunye the best zokushushuluza eqhweni eduze eMoscow. Udabula ehlathini olunothile, kanye emfuleni floodplains Cunha futhi sigcinwe esimweni esifanele: surface njalo siyamanisa snowcat (a isikeyiti futhi zakudala). Ubude obuphelele - 12.5 km, ububanzi kusukela amamitha 6 kuya ku-9. Ukukhetha "Relight" (hotel) njengoba izindlu, sebenzisa ithrekhi nhlobo lonke izindleko entry - ruble 200, nge ekhethekile izikibha. Thatha ngaphansi idiphozi ibuye, kanye ukuthenga imishini kungenzeka on-site isikhungo A. Legkova. He is omele esemthethweni brand best. Ngaphezu kwalokho, eziyinkimbinkimbi kungaba kuqashwe kusuka cishe kunoma imishini ezemidlalo (skates, eqhweni, njll).
Thola ukuxhumana umlando kanye ubuhle Folk art - lena elinye ithuba anikezwa Park Hotel "Relight". Sergiev Posad itholakala km 15 nje kusukela multi-eziyinkimbinkimbi. Emzini Russian lasendulo njalo uhlelela hambo ezihlukahlukene. Ngo nohlaka zabo, izivakashi ungavakashela Holy Trinity-St uSergiyu Lavra (Monastery kwekhulu XIV), Pokrovsky Monastery, emzini Sergiya Radonezhskogo - Radonezh, umnyuziyamu-reserve "Abramtsevo", Chernigov-yaseGetsemane sezindela nge womhume isithonjana ngokuyisimangaliso, Gremyachiy impophoma.
"Relight" (Ihhotela): Izibuyekezo
Ukuhlaziya isipiliyoni lezihambi kanye nezivakashi abaye bavakashela ihhotela, kumele kuphetfwe anakho ukuphumula okuhle futhi aziphumulele sizungezwe nemvelo. Iningi Izibuyekezo akhayo. Izivakashi zehhotela ukugcizelela nokugxila kwawo umndeni iholide yothando. Ngokusho bakithi, izinga lesevisi kuphezulu kakhulu, izisebenzi inhlonipho futhi enobungane. Kuyaphawuleka indawo eziyinkimbinkimbi, ke ihlanganisa ukusondela ukuba inhloko-dolobha, ukuba ngedwa e- ehlathini ukusondela ukuba izingosi mlando.
I-Hotel Solemar Ihhotela 3 * (Rhodes, Greece): ukubuka jikelele, incazelo kanye nokubuyekezwa kwezivakashi
Kanjani ukuze uthole ilayisense unogada? Kunelayisense unogada yangasese
Tracheitis: izimpawu ukuvuvukala oyingozi futhi ezingalapheki we kuqhoqhoqho
Kuhle nesilevu kusilungisi: Izibuyekezo
Uchungechunge oluthi "National Security Agent": abalingisi, izindima, sakhiwo isifinyezo